Nhasi, pa 17 February 1923 Izmir Economy Congress, yakasarudzwa kutanga matanho ekuvaka kuvaka mukati megurogiramu. 17 yakava Mutevedzeri Attorney we1934 Ali Çetinkaya Nafia. Iko kunokwira mumigwagwa.
Bursa Metropolitan Municipality yakatanga kugadzirira chirongwa chekumisikidza nekuvandudza kwenzizi, pamwe nemabasa anosanganisira kuyambuka migwagwa nemabhiriji mu Çağrışan Dunhu reMudanya. Mumatunhu ese, kusangana nevakuru vevavakidzani uye kuva nematambudziko kutanga [More ...]
Mutemo unopesana neIstanbul Ministry of Environmental uye Urbanization nekuzvidira kupokana nekubviswa kweiyo EIA sarudzo yakanaka yeCanal Project, iyo iri kufanofunga kuti ichaitwa neIstanbul Bar Association pakati peGungwa dema neGungwa reMarmara, [More ...]
1 2 ... 4.542 »